Calanka Soomaaliya Ma La Badali Karaa? Sarkaal DF-ka Ka Tirsan Ayaa Ka Jawaabay | Xaqiiqonews
Calanka Soomaaliya Ma La Badali Karaa? Sarkaal DF-ka Ka Tirsan Ayaa Ka Jawaabay
Taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya Maxamed Tahliil Biixi oo ku sugan Baladxaawo ayaa sheegay in Df-ka ay cafis u fidisay dhalinyarada Kenya hubeysay isaga oo ku carabka ku adkeeyey in ilaalinta midnimada dalka Loo siman yahay.
Biixi ayaa waalidiinta dhalinyaradaas ka dalbaday in ay ka qeyb qaataan badbaadinta mustaqbalka dhalinyaradaas.
Waxa uu intaasi ku daray “Madax bannaanida dhuleed kuma xirna Dowlad ama shaqsiyaad balse waa dan guud oo waajib ku ah, maadaama la badali karo Dowladda, lama badali karo Calanka, Dhulka & Nidaamka, sidaas awgeed waa muhiim in la ilaaliyo dalka oo la difaaco.”